इलेक्ट्रिक मोटर्स सूची
इलेक्ट्रिक मोटर क्याटलग
इलेक्ट्रिक मोटर्सको क्याटलग
Y2 श्रृंखला इलेक्ट्रिक मोटर्सको सूची खोज्नुहोस्
Y2 श्रृंखला इलेक्ट्रिक मोटर्स नवीकरण प्रविधिको साथ विकसित गरिएको छ
समाधानको विस्तृत दायराले नारालाई दर्शाउँछ कि रीगल बेलोइट उत्पादनहरू हुन्। यस क्याटलगमा चित्रित सबै इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रासंगिक पूरा गर्छन्। चीन आपूर्तिकर्ताबाट इलेक्ट्रिक मोटर सूची। औद्योगिक स्तरका आधारमा औद्योगिक तीन चरण मोटर्स, औद्योगिक तीन चरण मोटर्स अनुरूप अतिथि मानक। को AH एएएच श्रृंखला तीन चरण स्क्वेरिल-केज प्रेरण मोटर्स इन-ढोका परिसरमा दीर्घ-अवधि संचालनको लागि लक्षित छन्।
Y2 श्रृंखला उच्च भोल्टेज उच्च क्षमता तीन चरण प्रेरण इलेक्ट्रिक मोटर
यो आवश्यक छ कि इलेक्ट्रिक मोटर्स अनुभवी, योग्य र अधिकृत कर्मचारीहरू द्वारा स्थापित गरिएको छ। मा उत्कृष्टता को लगभग शताब्दी मोटर र जेनरेटर निर्माण। चीन GOST मानक इलेक्ट्रिक मोटर, GOST तीन चरण इलेक्ट्रिक मोटर एक नयाँ उत्पादन हो जुन हामीले पूर्वी यूरोपको बजार, रुस, युक्रेन, इत्यादि डिजाइन गरेको हो। मानक सन्दर्भ सामग्री, तापीय चालकता र विद्युतीय प्रतिरोधकता।
Y2 शृंखला मोटर्स अप्रिय डिजाइन र फ्यान कूल्ड प्रकारमा छन्
इलेक्ट्रिकल मेशिनहरू घुमाउनका लागि आयामहरू र आउटपुट श्रृंखला। यो विशेष गरी युरोपेली बजारको लागि डिजाइन गरिएको हो, जसको टर्मिनल बक्स मोटरको माथि छ। यो पुस्तिकाको नयाँ मानकीकृत इंटर्ना-ओन्टल दक्षता वर्गहरूको वर्णन गर्दछ। मुख्य मानकहरू कम भोल्टेज मोटर्स को लागी। एबीबीले दुई प्रकारको कम भोल्टेज प्रदान गर्दछ प्रेरण मोटर श्रृंखला। मानक प्रेरण मोटर्स, जुन रसायन, तेल र ग्यास उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, छुट्टै सूचीमा प्रस्तुत गरिन्छ।
आईईसी मानक पीडीएफ क्याटलग
Gost मानक पीडीएफ क्याटलग
Yej श्रृंखला ब्रेक गरिएको इलेक्ट्रिक मोटरको सूची खोज्नुहोस्
YEJ श्रृंखला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ब्रेक तीन चरण इलेक्ट्रिक मोटर
चीन YEJ श्रृंखला विद्युत चुम्बकीय ब्रेक तीन चरण इलेक्ट्रिक मोटर सूची YEJ Alu तीन चरण ब्रेक मोटर, YEJ तीन चरण ब्रेक प्रेरण मोटर्स। युरोपमा, कम भोल्टेज इलेक्ट्रिक मोटर्सको उर्जा दक्षता।
YEJ श्रृंखला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तीन चरणको एसिन्क्रोनस मोटर
YDEJ2 श्रृंखला विद्युत चुम्बकीय ब्रेक मोटर्स YEJ श्रृंखला को सुधारिएको उत्पाद हो, यो जेबी / T6456 आवश्यकता अनुसार छ। इम्कोर व्यावसायिक इलेक्ट्रिकल हो मोटर स्टेटर र रोटर फाड़न निर्माण।
पोटेशोमिटरको विद्युतीय प्रतिरोध लोडको अनुपातमा भिन्न हुन्छ
एक चोटि स्थापना भएपछि घुमाउरो फ्ल्याप मोटर हाउजि ref परिष्कृत हुन्छ यो बंग ठाउँमा राख्छ। BMW 320d समस्याहरू BMW3श्रृंखला कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो बिक्री दायरा हो। जर्मनीमा आधारित, बभेरियन मोटर वर्क्स - बीएमडब्ल्यू - एक बर्षमा दस लाख भन्दा बढी कार उत्पादन गर्दछ।
पीडीएफ क्याटलग डाउनलोड
इस्पात उद्योगमा डीसी मोटर्सको क्याटलग खोज्नुहोस्
डीसी मोटर्स सामान्यतया प्रयोग हुन्छन् मोटर अनुप्रयोग गति समायोजन आवश्यकता अनुप्रयोगहरू
हाम्रो डीसी मेशिनहरूले माउन्टि arrangements्ग सिस्टम, कूलि systems सिस्टमको विशाल चयन प्रदान गर्दछ। मोटर निर्माणमा १०० वर्ष भन्दा बढीको अनुभवको साथ। DC मोटर्स मोटर्स र जेनरेटर ब्रोशर Motortecnica र सेवा।
२ ड्राइभ र नियन्त्रणहरू, मोटर्स र मेकानिकल पावर ट्रान्समिशन सूची
यो क्याटलगले औद्योगिक अनुप्रयोगको लागि डीसी मोटर्सको बारेमा प्राविधिक जानकारी दिन्छ। मुख्य डाटा प्लेट स्टेनलेस स्टीलमा छ र यो मोटर फ्रेममा राम्ररी रिभ्ट गरिएको छ।
नयाँ, प्रयोग गरिएको र अधिशेष औद्योगिक DCelectric मोटर्सको विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोज योग्य ईन्भेन्टरी बिक्रिमा। औद्योगिक ग्रेड एयर मोटर, सरल संरचना, सानो आकार, हल्का वजन, उच्च अश्वशक्ति।
क्याटलग PDF डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
एकल चरण मोटर फलाम र एल्युमिनियम आवासको क्याटलग
सामान्य उद्देश्य एकल चरण मोटर्स
ऊर्जा कुशल तीन चरण गिलहरी केज प्रेरण मोटर्स। एकल pahse प्रेरण मोटर। यो सूची एसिन्क्रोनस गिलहरी केज मोटर्सको म्याकेनिकल र इलेक्ट्रिकल सुविधाहरूसँग सम्झौता गर्दछ। "प्रतिरोधहरू" को मामलामा, आपूर्ति भोल्टेज उच्च, वर्तमान अधिक। यस कोटलगमा सूचीबद्ध डाटा सहि छ भनि सुनिश्चित गर्न हरेक प्रयास गरिएको छ।
क्रम्प्टन ग्रीभ्स एफएचपी एकल चरण मोटर्स क्याटलग
१) माथिका सबै मोडेलहरू एकल चरण हो GF 1 except बाहेक। २) ”6739" फ्यान मोटर्स पनि अनुरोधमा उपलब्ध छन्। )) गति चयनकर्ता स्विच वैकल्पिक। एकल गति तीन-चरण केज प्रेरण मोटर्सको कक्षा। मोटर्सलाई उच्च ग्रेड डाई केस एल्युमिनमबाट निर्माण गर्न सकिन्छ। 2०% भन्दा बढी कारोबार इलेक्ट्रिक मोटरले उत्पन्न गरेको हो. तीन चरण र एकल-चरण एसिन्क्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर्स, पूर्ण रूपमा बन्द. डाई-कास्ट एल्युमिनियम मिश्र, आकार १S० एस को लागी B5 फ्ल्यांज बाहेक
तीन चरण र एकल-चरण एसिन्क्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर्स
क्यान्टोनी मोटरको सम्पूर्ण सामान्य उद्देश्य सिंगल फेज इन्डक्शन मोटर्स कैटलॉग डाइरेक्टइन्डस्ट्रीमा परामर्श लिनुहोस्। यस क्याटलगमा प्रदर्शित सबै डिजाइन, जानकारी र छविहरू एटीटी इलेक्ट्रिकको सम्पत्ति हुन्। कम भोल्टेज मोटर्स मोटर गाइड एकल चरण, उदाहरणका लागि, इलेक्ट्रिक मोटर र ड्राइभको खरीद मूल्य केवल १- 1-3 प्रतिशत छ। एल्युमिनियम मिश्र धातु आवास हल्का वजन महसुस। ठूलो भिन्नता हेर्नुहोस्। एकल-गति तीन चरणको केज प्रेरण मोटर्सको आपूर्ति भोल्टेजहरूको लागि प्रदर्शन सुरू गर्दै।
फलाम आवास पीडीएफ क्याटलग
एल्युमिनियम आवास पीडीएफ क्याटलग
AEEF श्रृंखला इलेक्ट्रिक मोटरको सूची खोज्नुहोस्
यस क्याटलगले मोटर्सको दायरा छोपेको छ
उत्पाद विवरण AEEF श्रृंखला मोटर तीन चरणमा छ, पूर्ण रूपमा संलग्न र fan-चिसो इलेक्ट्रिक मोटर गिलहरी केजको साथ। कारीगरीले टेको मोटर्सलाई धेरै लामो बनाउँछ र लागत-कुशल अपरेशन दिन्छ।
AEEF श्रृंखला तीन चरण प्रेरण इलेक्ट्रिक मोटर
यस क्याटलगले इलेक्ट्रिक मोटर्सको सम्पूर्ण दायराको लागि टेक्निकल डाटा समावेश गर्दछ वा OMEC द्वारा वितरित गरिएको छ। मोटर्स। मोटर डिजाइन र अनुप्रयोगमा १०० बर्ष भन्दा बढीको अनुभवको साथ।
तीन चरण AEEFhorizontal बाहिरी शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर
हामी चीनमा yt / aeef तीन चरण इलेक्ट्रिक प्रेरण मोटर एकल चरण प्रेरण मोटर्सको उच्च प्रख्यात निर्माता र आपूर्तिकर्ता हौं। पूर्ण रूपमा संलग्न र प्रशंसक-कूल्ड विद्युतीय मोटर गिलहरी केजको साथ
नरिवल खन्ने इलेक्ट्रिक मोटरको क्याटलग फेला पार्नुहोस्
चीन २००W नारियल डिगर एसी एकल चरण इलेक्ट्रिक मोटर
चीन 200W नारियल डिगर एसी एकल चरण इलेक्ट्रिक मोटर, 200W नारियल डिगर एसी एकल चरण इलेक्ट्रिक मोटरबाट चाइना मोटर, इलेक्ट्रिक मोटरको बारे विवरण प्राप्त गर्नुहोस्।
२००W नारियल डिगर एसी एकल चरण इलेक्ट्रिक मोटर
२०० डब्लु नरिवल एकल चरण प्रेरण मोटर अपरेटि Cond सर्तहरूसमान तापमान। नीलसँग फेरि उसका खन्नहरू र अन्य छुटहरू हुनेछन्। यूनिवर्सल लाइटिंग रियन्टले तपाईंलाई चाहिने सबै बिजुली प्रदान गर्दछ।
Yzb श्रृंखला नयाँ नारियल खोदने मोटर
नील फेरि आफ्नो हुनेछ खनेर र Cavalcade मा अन्य छुट। जब हामी तपाईंको जिज्ञासाहरू प्राप्त गर्छौं, हामी अनुरूप सूची, प्रिकलिस्ट, क्षमता नारियलको हथौड़ा मिल mill जैक जाइरेटरी क्रेशर बिक्री पठाउनेछौं।
इलेक्ट्रिक मोटर पार्ट्स को सूची खोज्नुहोस्
औद्योगिक मोटर प्रतिस्थापन पार्ट्स मूल्य सूची
यस क्याटलगले प्राय: अनुरोध गरिएको प्रतिस्थापन भागहरू देखाउँदछ तीन चरणको लागि, क्यापेसिटर प्रकार। यो एक इलेक्ट्रिक मोटर मर्मत पसल को रूपमा शुरू भयो र बर्षौं। कृपया हाम्रो क्याटलग मार्फत ब्राउज गर्नुहोस्।
इलेक्ट्रिक मोटर्स र पम्पहरूको लागि प्रतिस्थापन पार्ट्स
Grainger बाट तपाईंको मोटर प्रतिस्थापन भागहरू प्राप्त गर्नुहोस्! मोटर ब्रश सेटहरूको लागि खरीद गर्नुहोस्, प्रतिस्थापन ब्रश संयन्त्र, मोटर स्प्रि .हरू। थोक मूल्य निर्धारण र नि: शुल्क शिपिंग पाउनुहोस्।
एक इलेक्ट्रिक मोटर र ड्राइव को खरीद मूल्य
हाम्रो युएसमा सुविधाजनक पहुँच मोटर्स ब्रान्ड क्याटलग यहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। ब्रोशर, डाटाशीटहरू र अन्य उत्पादन साहित्यहरू अन्वेषण गर्नुहोस्। कोपल्याण्ड स्क्रोल कम्प्रेसरहरूको लागि स्पेयर पार्ट्स र सेवा जानकारी द्रुत रूपमा फेला पार्नुहोस्।
थप क्याटलगहरूका लागि, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्